Sida dhibcaha loogu helo Shein si dhakhso ah | Madasha Mobile
Sida dhibcaha loogu helo Shein si dhakhso ah
Eder Ferreno | | Barnaamijyada
Shein waa mid ka mid ah dukaamada dharka ugu caansan ee khadka tooska ah ee xilligan, meel aan ka heli karno dharka ugu xiisaha badan. Mid ka mid ah furayaasha Shein waa nidaamkeeda dhibcaha, taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan helno qiimo -dhimis. Nidaamkani waa shaki la'aan wax ku biirinaya dad badan oo doonaya inay koonto ku yeeshaan dukaankan oo doonaya inay kasbadaan dhibco, wax suurtagal ah siyaabo kala duwan.
Kadib waxaan dhammaan kuu sheegnaa nidaamka dhibcaha ee Shein. Habkan waxaad awoodi doontaa inaad ogaato habka dhibcaha lagu heli karo hab fudud dukaankan dharka. Qodobbada qaarkood oo aad awoodi doonto inaad adeegsato goor dambe iibsashadaada xigta oo aad sidaas ku hesho qiimo dhimis iibsiyadaas.
1 Maxay yihiin qodobbada Shein iyo maxay yihiin?
2 Sida loo kasbado dhibcaha Shein
2.1 Xaqiiji koontadaada
2.2 Gaadiidka Dukaanka
2.3 Faallo ku saabsan alaabta
2.4 Fur appka maalin kasta
2.5 Ra'yi ururinta iyo dhacdooyinka
3 Qodobadu ma dhacayaan?
Maxay yihiin qodobbada Shein iyo maxay yihiin?
Shein waxay ku leedahay bakhaarkeeda barnaamij dhibco ah, kaas oo loogu talagalay in adeegsadayaasha waxay ka heli karaan qiimo dhimis iibsigooda gudaheeda. Qodobbadaas siyaabo kala duwan ayaa loo heli karaa oo sidaas ayaa lagu ururin doonaa koontada isticmaaleha, yaa markaa go'aansan kara haddii ay rabaan inay adeegsadaan markay wax iibsanayaan, si qiimaha la bixinayo uu u hooseeyo iyadoo la adeegsanayo qodobbadaas.
Dukaanku wuxuu bixiyaa habab badan oo dhibco lagu kasbado, sidaa darteed kuwa xiiseynaya ayaa had iyo jeer heli doona hab ay ku kasbadaan dhibco si ay ugu adeegsadaan iibsigooda. In kasta oo ay muhiim tahay in maanka lagu hayo in xaddiyo taxane ah loo sameeyay arrintan, haddana inta ugu badan ee dhibcaha la heli karo ama la heli karo maalin kasta. Kuwani waa kuwa ugu sarreeya:
Ugu badnaan 8.000 dhibcood maalintii guud ahaan.
Ugu badnaan 2.000 oo dhibcood maalintii faallooyinka.
Ugu badnaan 500 dhibcood maalintii dhacdooyinka.
Ugu badnaan 200 dhibcood maalintii sahaminta.
Taasi waa sababta ay tahay inaan taxaddar u yeelano Markaan isku dayeyno inaan ku helno dhibcaha Shein, inaanan dhaafi doonin ugu badnaan ee uu dukaanku dejiyo arrintan. In kasta oo sida caadiga ah ay adag tahay in la gaaro heerkan ugu sarreeya, maxaa yeelay waxay la macno tahay inay run ahaantii tahay inaan ku dhaqaaqno falal badan isla maalintaas iyo sidoo kale, had iyo jeer suurtagal maaha in sahamin ama faallooyin badan la sameeyo hal maalin, tusaale ahaan.
Sida loo kasbado dhibcaha Shein
Tani waa waxa inta badan adeegsadayaashu xiiseeyaan, sida ay taasi suurtogal u tahay. Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo badan oo lagu kasbado dhibcaha Shein, markaa hubaal waxaad heli doontaa ikhtiyaarro xiiso kuu yeelan doona. Dukaanka iyo abka taleefannada ayaa kuu oggolaanaya inaad kasbato dhibco adiga oo aan dadaal badan samayn. Uma baahnid inaad sameyso wax la yaab leh si aad u hesho dhibco koontadaada, oo aad gadaal u adeegsan doonto iibsashada. Waxaan kuu sheegeynaa hababka jira si aad u hesho dhibco si dhab ah oo fudud.
Tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan sameyno markaan bilowno adeegsiga dukaankan waa in la xaqiijiyo koontadayada. Tallaabadani waxay leedahay abaalmarin, maxaa yeelay xaqiiqda xaqiijinta emaylka iyo koontadayada ayaa durba na siineysa 100 dhibcood Shein. Markaad koonto ka furato dukaanka, waxaad heli doontaa emayl kaa codsanaaya inaad xaqiijiso cinwaanka emaylka. Waxa kaliya oo ay tahay inaad fuliso tallaabooyinka la tilmaamay (badiyaa guji xiriirinta) tanina waxay xaqiijin doontaa koontadaada.
Iibsasho kasta oo aad ku samayso Shein waxay ku siin doontaa dhibco. Waxa caadiga ah ayaa ah in dukaanku na siin doono hal dhibic oo ah euro kasta ama doolar kasta oo aan kharash garaynay si kastaba ha ahaatee. Taasi waa sababta haddii aan ku dhejinnay dalab mug weyn oo dukaanka ah, oo laga yaabo inuu gaadho boqollaal euro, waxaan ka helaynaa qaddar wanaagsan oo koontadayada ku jira arjiga. Qodobbadaas waxaa lagu daraa koontada marka la xaqiijiyo rasiidka amarka.
Faallo ku saabsan alaabta
Haddii aad dalbatay amar, dukaanka ayaa ku siinaya suurtogalnimada in la sameeyo faallooyin ama qiimeyn ku saabsan alaabtaas aad samaysay. Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wax ku oolka badan ee aan u adeegsan karno inaan ku helno dhibcaha Shein, maadaama dukaanku muhiimad weyn siiyo faallooyinka isticmaaleyaasha oo uu doonayo inuu kiciyo faallooyinka ama qiimeynta ku saabsan alaabta. Waxaa laguu oggolaan doonaa inaad faallo ka bixiso dhammaan badeecadaha aad heshay ama ku iibsatay koontadaada.
Intaa waxaa dheer, waxay raadineysaa inay kiciso faallooyinkaas ama qiimeyntu waa sida ugu faahfaahsan ee suurtogalka ah. Sidaa darteed, waxaa jira nidaam dhibic oo loogu talagalay faallooyinka dukaanka. Tani waa waxa aad ku guuleysan karto kiiskan:
5 dhibcood oo dhajinta faallo ah.
10 Qodob oo loogu talagalay dhajinta faallo oo ay ku jiraan sawir (ugu yaraan hal).
2 Dhibcood haddii aad ku darto faallo leh qiimeyn cabbir.
Sida aad arki karto, aad bay u xiiso badan tahay in la daabaco dib u eegista alaabta aad ka iibsatay Sheinmaadaama ay tahay hab fudud oo lagu kasbado dhibcaha koontadaada. Si aad awood ugu yeelatid inaad faallo ka bixiso waa inaad sugtaa ilaa aad ka hesho amarka ka dibna app -ka, geli astaantaada oo aad qaybta la diray. Halkaas waxaad ka heli kartaa dhammaan amarradaada waxaadna awoodi doontaa inaad faallo ka bixiso alaabta aad rabto.
Dukaanka ayaa kuu oggolaanaya faallo u samee badeecad kasta oo amarkaas ah. Taasi waa, haddii aad soo iibsatay shan badeecadood oo kala duwan, waxaad fursad u leedahay inaad ka tagto shan faallooyin ama qiimeyn oo kala duwan. Iyada oo ku xidhan nooca faallada aad ka tagtay, waxaad awoodi doontaa inaad kasbato 50 dhibcood kiiskan, markaa waa ikhtiyaarka ugu xiisaha badan inta badan dadka isticmaala Shein. Ma awoodi doontid inaad faallo ka bixisid haddii aadan alaab ka iibsan dukaanka.
Fur appka maalin kasta
Ikhtiyaar ay Shein ku doonayso inay adeegsadayaasha ku sii hayso barnaamijka maalin kasta. Helitaanka koontadaada arjiga maalin kasta waxay kuu oggolaan doontaa inaad hesho dhibco. Kani waa isqoritaan maalinle ah, taas oo macnaheedu yahay inay tahay inaan marinno arjiga maalin kasta 7 maalmood, si maalin kasta aan ugu kasban karno dhibco badan koontadayada. Waxaan kaliya yeelan doonnaa inaan galno koontada, laguma weydiinayo inaad wax kale ka qabato arrintan.
Wareeggan 7-maalmood ah waxaan awood u yeelan doonnaa inaan helno dhibco badan maalin kasta oo aan galno. Dhab ahaantii, usbuuc gudaheed waan awoodnaa kasbato wadar ahaan 37 dhibcood barnaamijka, adigoon lacag ku bixin. Si fudud markaan furno app -ka oo aan galno akoonkeena, waxaan hore u helnay qodobbadaas.
Ra'yi ururinta iyo dhacdooyinka
Codsiga ku jira Android iyo macruufka Shein waxaan waxaan helnay qayb sahan. Qaybtani waa hab kale oo lagu helo dhibco si dhakhso ah oo fudud, taas oo aan u adeegsan doonno goor dambe iibsashadayada. Codsigu caadi ahaan wuxuu leeyahay sahanno ku filan oo la heli karo, kuwaas oo aan awoodi doonno inaan ka jawaabno markaas, si aan xisaabta ugu helno dhibco. Waxa caadiga ah ayaa ah in sahannadan ay yihiin kuwo degdeg ah oo shan daqiiqo gudahood ayaan ku dhammaynay, inkasta oo ay inta badan tilmaamaan inta ay qaadanayso in la bilaabo.
Xaddiga dhibcaha aan ku kasban karno sahannadan Shein waa mid kala duwan. Waxaa jira sahanno aan ku kasban karno 20 dhibcood kuwa kalena waxay na siiyaan kaliya 1 ama 2 dhibcood, marka waxaa jira waqtiyo ay u muuqato inaysan u qalmin dhammaystirka sahankan. Haddii aan raadineyno inaan helno qaddar dhibco ah oo aan gaabinno, dhammaystirka dhowr sahan ayaa loo soo bandhigay hab fudud oo lagu gaari karo. Kaliya isticmaaleyaasha ku jira barnaamijka ku jira Android iyo iOS ayaa awoodi doona inay sameeyaan, kama soo geli karto shabakadda.
Dukaanku wuxuu kaloo qabanqaabiyaa dhacdooyin kala duwan, kuwaas oo tab ku leh barnaamijka. Waan arki karnaa dhacdooyinka jira oo waxaan ku kasban karnaa dhibco si fudud markaan ka qaybgalno, tusaale ahaan. Waa hab kale oo fudud oo lagu kasban karo.
Qodobadu ma dhacayaan?
Mid ka mid ah shakiga dadka isticmaala badan ee Shein waa haddii dhibcaha ay kasbadeen ay dhacaan. Jawaabtu waa haa tanina waa wax ay tahay inaan si dhab ah ugu fiirsanno, sababtoo ah ma ilaalin karno qodobbadaas koontada weligeed. Sidoo kale, waqtiga ay qaadanayso inuu dhaco waa wax si weyn isu beddelaya, iyadoo ku xiran sida aan u helnay dhibcahaas markii hore.
Tani waxay u qaadanaysaa in qodobbada aan ku helnay faallo leedahay taariikh dhicitaan oo ka duwan kuwa aan ku helnay sahan-ku-dhex-dhexaadinta Android ama iOS. Qaybta dhibcaha ee arjiga dhexdiisa waxaan ku leenahay taariikh aan ku arki karno dhammaan dhibcihii aan helnay, halkaas oo lagu tilmaamay habka aan ku helnay dhibcahaas iyo waliba dhicitaankooda. Markaa waxaan ognahay goorta aan ugu adeegsan doonno iibsashada aan qorsheyneyno inaan sameyno.
Waxaa jira qodobo qaarkood oo dhaca toddobaad kadibhalka kuwa kalena ay socon karaan ilaa saddex bilood. Sidaa darteed waxaa aad muhiim u ah inaan had iyo jeer maanka ku hayno taariikhda dhicitaanka, gaar ahaan haddii aan sugaynay inaan gaarno qaddar go'an ka hor intaanan dalbin Shein, maxaa yeelay waxaa dhici karta in markii la gaaro waqtigii la amri lahaa noqo dhibco taxane ah oo aan hore u luminay, maxaa yeelay way dhaceen. Had iyo jeer maskaxdaada ku hay dheelitirkaaga waa hab wanaagsan oo lagu hubiyo inaadan lumin ama aadan iloobin inaad isticmaasho qaar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Sida dhibcaha loogu helo Shein si dhakhso ah
Sida loo ogaado inta kombiyuutarkeygu shaqeynayay